Psychology uye vaviri - Bezzia | Bezzia
Psychology uye vaviri
Vakadzi vanobatanidza kukosha kukuru kuchitarisiko chavo, nekuti mukuwedzera pakuve vane hutano uye vakasimba mupfungwa, vanofarira kutaridzika vakanaka. Asi dzimwe nguva, vanogona kuvapo matambudziko emukati izvo zvinoita kuti nyika yese yemunhu ipunzike: matambudziko nevabereki, neumwe wako, nezvidzidzo, kuzivikanwa kana hunhu.
Naizvozvo, isu takagadzira chikamu chemisoro iyi, Psychology uye Couple, ndiani achaedza kubatsira vasikana vanotambura nematambudziko aya, kuita kuti tione zvinhu izvo zvimwe zvatisina kumboona kare. Kunyangwe tichijekesa kuti isu hatisi masayendisiti uye kuti kana ukatambura nedambudziko rakakomba unofanirwa kuenda kune rudzi urwu rwehunyanzvi, kuBezzia tichakupa rairo inokubatsira kutarisana nemhando iyi yemamiriro.
Tichatarisawo nyaya idzi kubva pane yakanaka maonero: kutaura nezve nzira yekufambidzana nemhuri yedu kana maratidziro ehunyanzvi hwekunyengera. Iwe unofarira here?
Rudo rune simba rei pauropi
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 4 mazuva .
Hapana mubvunzo kuti rudo runopesvedzera zvakananga mamiriro emunhu epfungwa ...
Kana rudo runganzi nderwechokwadi
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 5 mazuva .
Hazvisi nyore kana nyore kuwana rudo rwechokwadi uye nekunakidzwa naro. Avo vane rombo rakanaka ...
Iyo mamiriro anoratidza mhando yeiyo imwe
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 6 mazuva .
Zvirokwazvo chirevo chinonzwika kuva chakajairika kwauri: "Zvirinani uri wega pane kushamwaridzana nevakaipa." Nhasi kune vanhu vazhinji ...
Kushushikana uye kushushikana, ndeupi mutsauko?
Kufunganya uye kushushikana zvinofambidzana muzuva redu kusvika zuva. Nekuti vese vanogara varipo uye isu tinoteerera kutaura ...
Chii chinonzi trauma bonding?
Hukama hunofanirwa kuve hwakavakirwa nguva dzese, parudo pakati pevanhu vaviri uye pakutsvaga ...
Kunyangwe zvingaite senge nhema, nhasi kuchine zvakawanda zvekufambira mberi munzvimbo ine nharo sezvazviri ...
Vazhinji vanhu vanowanzo batanidza kusatendeseka nebonde, zvisinei, kuzivana kwacho kunogona kuitika ...
Haisi chokwadi chekudzora kushushikana? Ehezve hachisi chinhu chiri nyore kwazvo kuita asi chinoita ...
Vaviri vanofanirwa kuenda rinhi kurapwa kwepfungwa
Kuwana mudiwa akakwana chimwe chinhu munhu mukuru wese chaanoshuvira muhupenyu hwake hwese. The…
Pane zvinhu zvishoma zvinoyevedza muhupenyu huno kupfuura kugona kugovana rudo nemumwe munhu. Kune chero munhu…
Zvinowanzo taurwa kuti muhukama hune hutano munhu anopa asingatarisiri chero chinhu kudzoka. Nekudaro, kune vanhu vano ...
Piritsi rekuzvarwa: zvakanakira nekuipira
Chema mushure mekuita rudo
Zviratidzo zvinoratidza ex wako ane hurombo akamusiya newe
Mudiwa anova murume nemurume riinhi?
Mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri anobvisa chishuwo chebonde here?
Kana mhuri yangu isingagamuchire mumwe wangu